प्रधानमन्त्री हुनासाथ ओलीले लिए एक्सन, सरकारी कर्मचारीको कर्मचारीको रुवाबासी ! – पुरा पढ्नुहोस्……
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारी कर्मचारीको सम्पूर्ण विदेश भ्रमण स्थगित गर्न सरोकारवाला निकायलाई कडा निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयका सचिव र अन्य सरकारी निकायका प्रमुखलाई उक्त निर्देशन बिहीबार पठाएको हो। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट १२ खर्ब ७८ अर्बमध्ये पुस मसान्तसम्म ३ खर्ब ९९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुस मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख आन्तरिक ऋण उठाएको छ।
Prevदुखद: २ वर्षभित्र प्रदुषण रहित नेपाल बनाउछु भन्ने लालबहादुर पन्डितको मन्त्री पद नै गुम्यो
Nextमलेसियामा अलपत्र १० जना नेपालीको उद्धार..
गाईको मासु खान पाउनु पर्ने नियमको वकालत गरेकी सभामुख राखिका तामाङलाई गगन थापाले कडा अभिव्यक्ति…हेर्नूहोस जस्ताको तस्तै,,,,
बि’चरा : सृष्टिले एकबिहानै संसा’र छो’डिन, गाडीले हा नेपछि बेसरी चि’च्याए, अस्पता’लमा हेर्नुहोस…(भिडियो सहित)
डलरको भाउ घट्यो , साउदी, कतार दुबई , मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउमा पनि काफी फरक ….
दलितले खाजा पकाएपछि स्कुलको क्यान्टिनमा तालाबन्दी पुरा विवरण सहित हेर्नुहोस